The 10th Traditional Medicine Research Congress ဒသမအကြိမ်၊ တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ
Objectives : Please download here.
Agenda / Program : Please download here.
1. စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းများအကျဉ်းချုပ် (Abstracts of the Papers)
Day I PDF Files
01 - Daw Shwe Win Hlyan Min Formulation of facial cosmetic cream containing fruit extract
02 -Daw Wint Theingi 2020 Research Congress
03 - DawSaw PyaePyaeThu A Study on Job Satisfaction of Traditional Medicine
04 - Daw Moh Moh Soe Research Congress (25.2.20)
05 - Phyo Nyunt Oo
06 - Daw Nilar Win TM Research Congress 26.2.2020
07 - Daw Aye Thida
08 - Daw Ei Ei Cho
09 - Dr Moe Moe Yee, Traditional Medicine Presentation
10- Daw Kit Kit Htwe
11 - Daw Khin Myo Myint research congress final
12 - Daw Theingi Naing
Day II PDF Files
01 - Daw Theingi Swe(10th Research Congress) 27.2.2020
02 - Daw kaythikyaw Trad.Med. ppt
03 - Tain-yin-say power point (27-2-2020)
04 - Dr. Aye Myint Sein AMS,Traditional
05 - Daw Aye Aye Myat
06 - Daw Hnin Hnin Htun
07 - DrMoe Tin Khaing,,DrPPS, DrNNW Tri Med,2020
08 - DawNuNuAye Nayasuki
1. (၁၀)ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ ပိတ်ပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား
2. သုတေသနစာတမ်းများကို MHRR Research registry ပြုလုပ်ကြဖို့ ညွှန်ကြားရေးမှုး Dr. မိုးကျော်မြင့်က ရှင်းလင်းတင်ပြ
3. အရည်အသွေးမြှင့်ဖို့အတွက် ဒီလိုသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်
4. (၁၀)ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ဒုတိယပိုင်း
5. (၁၀)ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ပထမပိုင်း
6. (၁၀)ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ ညစာစားပွဲ အဖွင့်
7. တိုင်းဒေသကြီး ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ် ပိုစတာများ ကြည့်ရှု အားပေးခြင်း နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. မိုးဆွေ နှင့် MRTV interview
8. တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ဒသမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပ
9. တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒသမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို QR code မှ တဆင့် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ခြင်း
CTME Programme 11-1-2020
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) နှင့် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော
(၁၀၇)ကြိမ်မြောက် CTME စာတမ်းဖတ်ပွဲ တွင်....ဟောြော သူ များ အဖြစ်
ဦးလှမျိုးဝင်း နည်းပြ ဆေးပညာဌာနက ''ဝိဇ္ဇာဓရနယ ဆိုင်ရာ အခြေခံနည်းစနစ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး'' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း
ဒေါ်မို့မို့စိုး ၊ နည်းပြ ဆေးပညာဌာနက ''သွပ်ပြာစီမံပုံနှင့် အဆိပ်အာနိသင်စစ်ဆေးခြင်း'' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ‌ဟောပြေပြီး
ပါမောက္ခဝင်းနိုင်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား)ငြိမ်း ၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်
ဦးသန်းအုံး၊ ဒုတိယပါမောက္ခ/ဌာနမှူး(ငြိမ်း)၊ ကလေးရောဂါပညာဌာနက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစီအစဉ်ကို နံနက်(၉)နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ
ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဝင်းဆွေ+ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း စေတနာမွန် ဆေးတိုက် လွန်တောင်းရွာ က ကူညီပံ့ပိုးပါသည်။